China Cylindrical Roller Iburu emepụta na suppliers | Xinri
Agịga ala biarin
Angular Contact Ball biarin
Self kwado Ball biarin
Nwee Ntuchi Bọọlụ
Ohiri Isi Block Ball Iburu
Wheel Hub Iburu
Nwepu aka uwe
Miniature Deep uzo Ball Iburu
Ohiri Isi Block Biarin
A-● The esịtidem Ọdịdị nke cylindrical ala biarin adopts ala na-ndokwa ke ukem, na spacer retainer ma ọ bụ iche iche arụnyere n'etiti rollers, nke nwere ike igbochi uche nke rollers ma ọ bụ esemokwu n'etiti rollers, na n'ụzọ dị irè gbochie mmụba nke na-agbanwe agbanwe.
Capacity Ibu ikike buru ibu, nke bu ibu na-ebu radial.
Capacity Nnukwu ikike ịgba radial, nke kwesịrị ekwesị maka ibu dị arọ na ibu ọrụ.
Obere esemokwu ọnụọgụ, kwesịrị ekwesị maka nnukwu ọsọ.
Cylindrical roller biarin dị na a dịgasị iche iche nke aghụghọ, usoro, iche na nha. The isi imewe iche bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị e nyere ahịrị ndị dị n'ime / mpụta mgbanaka flanges yana onu aghụghọ na ihe.
Ntube ahụ nwere ike izute ihe ịma aka nke ngwa ndị nwere nnukwu ibu radial na nnukwu ọsọ. Nwere mwepụ axial (ma e wezụga maka biarin na flanges na mgbanaka dị n'ime na nke mpụga), ha na-enye nkwesi ike dị elu, esemokwu dị ala na ogologo ndụ ọrụ.
Cylindrical ala biarin nwekwara dị na akara ma ọ bụ gbawara n'etiti aghụghọ. Na akara akara, a na-echebe rollers ahụ site na mmetọ, mmiri na uzuzu, ebe ha na-enye njigide mmanu na mwepu mmetọ. Nke a na-enye obere esemokwu na ogologo ọrụ ndụ. Split biarin na-zubere isi maka amị ndokwa nke siri ike ịnweta, dị ka crank akụ, ebe ha mfe mmezi na edochi.
Ihe owuwu na atụmatụ
The raceway na Rolling ahu nke cylindrical ala agba nwere geometric shapes. Mgbe imeziwanye atụmatụ ahụ, ikike ịgba agba dị elu. Ọhụrụ Ọdịdị imewe nke ala ọgwụgwụ ihu na ala ọgwụgwụ ihu bụghị naanị mma amị agba axial amị ikike, kamakwa mma lubrication ọnọdụ nke ala ọgwụgwụ ihu na kọntaktị ebe nke ala ọgwụgwụ ihu na ala ọgwụgwụ ihu, na melite amị arụmọrụ.
● Nnukwu ibu ibu ikike
St Isi ekwe ekwe
Esemokwu dị ala
AccOmmodate axial na-ewepu
Ewezuga bearings na flanges na ma ime ime ya na elu ya.
Ihe mmeghe mmeghe
Ọnụ na ala ngere imewe na n'elu imecha, na-akwalite mmanu film guzobere n'ihi na obere esemokwu na elu axial ibu ebu ikike.
Life Ogologo ndụ ọrụ
Ihe nrịba ama nke logarithmic na-ebelata nrụgide ihu na kọntaktị na-agba ọsọ na ọsọ ọsọ na nnabata na ndọtị na ntụgharị.
Ability enwewanye ntụkwasị obi ịrụ ọrụ
Igwe a na-emecha na njedebe nke kọntaktị nke rollers na raceways na-akwado nhazi nke ihe nkiri hydrodynamic lubricant.
A na-agbanwe agbanwe ihe dị iche iche nke XRL cylindrical roller biarin. Nke a na-eme ka ịrị elu na ịrị elu, yana nyocha mmezi.
A na-ejikarị ya na nnukwu motors, locomotives, ihe eji arụ ọrụ igwe, igwe ọkụ ọkụ ọkụ, ndị na-emepụta ihe, ikuku gas, igbe igbe, igwe na-agagharị, ihe ntanetị, na igwe na-ebuli ma na-ebugharị.
Nke gara aga: Agịga ala biarin
Osote: * Tụkwasị na Roller biarin
niile abụọ cylindrical ala biarin
nnukwu cylindrical ala agba
cylindrical ala agba ngwa
nnf nup nupk cylindrical roller bear
Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala biarin
Anọ ahịrị Cylindrical ala biarin
Single Ahịrị Cylindrical ala Biarin
Linqing Xinri nkenke Iburu Co., Ltd. bụ a ezinụlọ pụrụ iche amị emeputa kemgbe afọ 2006, anyị nkà ihe ọmụma: nweta ntụkwasị obi site ime ihe n'eziokwu, merie site àgwà, ịzụlite site ọhụrụ, na-eme ka anyị onwe anyị ohere site ihe enterprising mmụọ. [..]
Adreesị: Yan Dian Town Industrial Park, Linqing City, Shandong Province, China
Ekwentị: + 86-635-2857766
Faksị: + 86-635-2857768